Faallooyinka buugga sheekooyinka
Faallooyinka iyo naqdinta buugga sheekooyinka
Trojan Horse 12. Beytlaxam
Lazarillo de Tormes, sheeko yar oo weyn
Xaqiiqda ah in uu yahay sheeko cusub oo aan la magacaabin ayaa laga yaabaa in uu qoraagiisa ka xoreeyey dulmarkii iyo faafreebkii waqtigiisa. Sababtoo ah dib loo daabacay 1554, "Noloshii Lazarillo de Tormes iyo nasiibkiisa iyo dhibtiisa", sida loogu yeero cinwaankeeda buuxa, ayaa ...
Erayada aan ku aamino dabaysha, waxaa qoray Laura Imai Messina
Dhimashada waa la diidaa marka aysan ahayn ka bixista saxda ah ee goobta. Sababtoo ah ka tagista adduunkan waxay tirtiraysaa dhammaan raadadka xusuusta. Waxa aan weligood dabiici ahayn waa dhimashada qofka la jecel yahay oo had iyo jeer halkaas joogay, xitaa in ka yar masiibo dhammaystiran. Khasaaraha ugu badan ee lama filaanka ah...
Bogga1 Bogga2 ... Bogga98 Xiga →